Ivo vanonyanya kutaura nyaya munhoroondo: ndivanaani? | Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Vanyori, Nyaya
La zvinyorwa zvipfupi Yakasangana nerumutsiriro mumakore achangopfuura nekuda kwemagariro enhau uye mashandisiro emashandisirwo ari kukurumidza kupfuura zvekare. Chiitiko chakanaka chekurangarira izvo vanyori venhau vakanakisa kare mukutungamira kwekurumbidza mhando iyo, kusvika pakati pezana ramakore rechimakumi maviri, yaigara nguva yayo chaiyo yegoridhe.
5 Charles kutadza
Akazvarwa muBoston muna 1809, Poe aive mumiriri mukuru wenyaya pfupi muUnited States uye mutangiri weiyo genre senge sainzi ngano iyo yaizovhura musuwo kune vamwe vanyori kubva muzana ramakore rechiXNUMX zvichienda mberi. Zvakare akafunga semunyori wekutanga kuyedza kurarama achishandisa nyaya dzake, munyori weGolden Beetle aive muranda wehupenyu hwakatarwa nematambudziko emhuri, doro uye kushushikana. Zviitiko kubva kune zvekare zvinyorwa zvemapfupi zvakabuda pakati nepakati peiyo satirical neGothic senge La caja oblonga, El Rey Peste kana, rake basa rakakura, Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa..
Kunyangwe zvaive Makore zana okusurukirwa nganonyorwa ingamuita iye nyeredzi yekunyora yaari nhasi, Gabo akarima hunyanzvi hwenyaya pfupi kubva pakutanga kwebasa rake. Kubva kuunganidzwa Imbwa yebhuruu mazisoizvo zvakatofungidzira vaMacondo vatinozoziva kuburikidza nesaga yeBuendía kune venhau Nyaya yekurasa, munyori weColombia akatipa nyaya dzinoverengeka dzakakodzera kutaura nezvadzo, pakati padzo zvine simba The Trace of Your Blood in the Snow, inosanganisirwa muunganidzwa Gumi nembiri Pilgrim Tales yaitaura nezvezviitiko zvevanhu vakasiyana vechiLatin muEurope uye yakaburitswa muna 1992.
Alice Munro, akahwina Mubayiro weNobel wa2013 muMabhuku.
Mubayiro weNobel Prize muna 2013 nekuda kwekushanda kwake nesimba panhau pfupi, weCanada Alice Munro ndomumwe weiyo mienzaniso yakanakisa yemazuvano ezvinyorwa zvipfupi. Kunyangwe zvinyorwa zvake zvekutanga zvakasvika muma60s, zvakange zvisiri kusvika kuma 70s kwaaizotanga kuzivikanwa nekutenda kuunganidzwa Unofunga kuti uri ani iwewe?, inoteverwa nekubudirira kwehumwe hunyanzvi hwakadai seyakakurumbira Mwedzi yeJupita. Nyaya dzaMunro dzinowanzo gadzirirwa muHuron County, Ontario, uye kusiyana neanobata kumeso evarume vanopokana, vakadzi vanopokana zvakanyanya kuomarara, vachiita muverengi nenyaya dzavo dzekusurukirwa, kuyananiswa, uye kufungidzira.
Kana paine munhu anotaurira nyaya kuti afunge, ndiye chiRussia Anton Chekhov, munyori akashanduka kuita simbaid kareidoscope yekwaakaberekerwa Russia, nyika ine chokwadi chaakatora kuburikidza nenyaya dzakamutsa huchokwadi uye hunhu hwekupera kwezana ramakore regumi nemapfumbamwe. Kunyangwe pakutanga Chekhov akatanga kunyora zviri nyore nekuda kwekuda mari, akazopedzisira ave kusanganisira mitsva vanguards kunge yemukati monologue, iyo yaizokurudzira vamwe vanyori vakaita saJames Joyce mushure mekubudirira kwebasa rake rakashandurwa nguva pfupi yapfuura Hondo Yenyika Yekutanga. Inoshanda senge Iyo Flying Islands, Iko kutsvoda Kusuruvara kwatova chikamu chenhoroondo yepasirese yezvinyorwa.
Kunyangwe pakutanga basa rake raive pamusoro pekurumbidza Louis the Great, padare raakashandira chikamu chezana regumi nemanomwe remakore, Perrault akafanirwa kudzoreredza ngano dzehupenyu hwese kuti azviunze kuzvizvarwa zvitsva nekuvaita kuti vagare nekusingaperi. Musiki wenyaya dzevana (kana pamwe kwete zvakanyanya) se Cinderella, Little Red Riding Hood kana Puss muBhutsu, yakabatanidzwa mubhuku Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa., Perrault anogona kunge ari mumwe wevanyori vanonyanya kutaurwa munhoroondo uye munyori kubva kwaari zvakasikwa zvevana zvehunhu, zvakasimbiswa kana Disney mafirimu.
Akazvarwa kuGerman asi akaverengerwa nyika muUnited States, Bukowski anomiririra mufananidzo wengano wemunyori akashatiswa: doro, satire uye bonde rakatenderedza tapureta yekuwana raramo (kana yekuramba uchiwana mabhenefiti kurarama hupenyu husina mwero). Kunyangwe zvinyorwa zvake zviri chikamu chebasa rake, dzaive nyaya pfupi dzakaita kuti ave nemukurumbira uye akafuridzira chizvarwa chese chevanyori chakamufadza. tsvina yakashata. Mienzaniso yakanakisa ndeye Iyo Fucking Muchina, anthology inounza pamwechete nyaya dzakasiyana pamusoro pevatambi nemamiriro ezvinhu muhupenyu hwezuva nezuva hwemunyori, kana nyaya Inoda Mukadzi, mune iyo Bukowski inotaura nezverudo rusingagone munyika ine hukasha.
Philosophy yakaruka basa reiyo yaionekwa seimwe vanyori vakanakisa vezana ramakore rechiXNUMX. Izvo zvaive kubva ipapo zvichienda izvo zvakasikwa zveArgentina Borges zvakazadzikiswa zvichiwana zvirinyore asi zvakare achikumbira mafomu. Zvinyorwa zvemasvomhu kana zvine musoro zvepamitambo, iyo yekufananidzira yeBhaibheri, Shakespeare kana iyo Cabala, yakasimbisa iyo trajectory yeiyi Mumiriri wekusingaperi weNobel Prize muMabhuku tsananguro yezvose uye pasina chinhu kuburikidza netsamba kana nyaya dzakadai sedzidziso Aleph zviite bhenji.
Mumwe munhu wekwaBorges, Cortázar haasi kumashure kumashure kana zvasvika pabasa rake semutauri wenyaya. Kunyangwe chikamu chenhaka yake chakatenderedza bhuku rake rine mukurumbira Rayuela, Cortázar akazadza nyika nenyaya dzaiwanzobata ruoko rwekufananidzira uye zuva nezuva, kunyanya munyaya dzakadai saLa noche bocarriba, pamwe imwe ye nyaya dzakanakisisa dzakamboitika, kana Axolotl, uko salamander yeMexico inoshanda senzira yekutaura nezvekusurukirwa kwemunhu.
Shamwari yemumwe munyori mukuru wenyaya wekuMexico akaita saJuan Rulfo, munyori wandakavamba mabhuku ezvinyorwa zvakaita sePan magazine, Arreola ndomumwe we vatapi venhau vakuru vezana ramakumi maviri uye aive mumwe wevaparidzi vane hunyanzvi muMexico. Basa rake rine mukurumbira, Kurangana, ndeyekuunganidzwa kwenyaya dzinogadzirisa, zvine mutsindo, matambudziko akadai sekusurukirwa, kuzviparadzanisa kana matambudziko erudo. Pasina kupokana, imwe yeiyo vanyori vekuMexico vese.
Izvi vanyori venhau vakanakisa kare Vakasimbisa rondedzero ipfupi asi yakadzama, vachiva vanyori vakakura venguva yavo uye vachikurudzira zvizvarwa zvenguva yemberi zvakashandura ipfupi kuita maitiro matsva.
Ndeupi waunofarira wekutaura nyaya?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nyaya » Vanyori vanonyanya kutaura munhoroondo
Walter gonzales akadaro
Iye anonyanya kutaura nyaya muPeru aive Sebastián Salazar Bondi
Pindura kuna Walter Gonzales
Chii chitsva kubva kuna Jo Nesbø. Mumatsutso Mugari wenhaka uye ... achadzoka Harry Hole